Ala buru ibu na Europe bụ mmalite nke akụkọ ifo na akụkọ ifo, pụtara Okirikiri, na obodo nile na-edebe ihe nzuzo ochie. Ọ dị nso n'obodo etiti obodo mepere emepe ma ọ bụ zoro ezo n'azụ ugwu nzu, ọnụ ọgụgụ obodo nta ndị mara mma na-adọrọ adọrọ na Europe enweghị njedebe. ma, enwere 10 Obodo ndị mara mma na Europe nke njiri mara mma na anwansi na-achịkwa ndị ọzọ niile.
A na-eji ihe osise ọdịnala chọọ ụlọ ndị ọcha Ihe odide oge ochie a na-akpọ sgraffiti. Ndị Rom, asụsụ obodo, lanarị ma ka na-ekwu taa.
Obodo na-ehi ụra n'akụkụ osimiri Moselle. Lọ ndị nwere ọkara ọkara na ụlọ ndị mara mma n'okporo ụzọ ahụ dị warara. Mara mma na ọdịda, Mgbe ahịhịa na ahịhịa ndụ ndụ na-eyi uwe ha na-acha ọla edo, na-agbakwunye na mma na ọdịdị ihe nkiri nke Cochem mara mma.
Gburugburu ubi vaịn ya na ugwu nta, Obodo Cochem zuru oke na akwukwo ozi. Thezọ kachasị mma iji nweta obodo na snap niile nlele obodo anya bụ site anyịnya igwe.
St. Ihe ndi anyi ji eme njem 10 villageslọ ndị mara mma dị na Europe na-ekele ụlọ ndị nwere mgbidi ụlọ elu. Na mgbakwunye, chọọchị nke narị afọ nke iri na abụọ na nnukwu ụlọ nke narị afọ nke 13 dị n'etiti obodo. Windzọ na-agba agba ga-agafe obodo nta ya na ụlọ okwute ya na-acha oji na ebe ndị mara mma na saịtị.
Ị nwere chọrọ embed anyị blog post “10 Obodo Scenic Na Europe”N'elu saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/?lang=ig የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
ebe ndị mara mma mmajilgeseaurope Obodo Fairytaletowns scenicvillageseurope obodo nta